Chii chinonzi Patreon uye chinoshanda sei? | ECommerce nhau
Chii chinonzi Patreon uye chinoshanda sei?
Mumwe wemibvunzo ingabvunzwe nevashandisi vazhinji ndeyekuti Patreon anoshanda sei uye kuti zvinokanganisa sei kuvandudzwa kwechitoro chako chepamhepo kana commerce. Zvakanaka, kubva panguva ino yekutarisa iyi ipuratifomu yedhijitari inopa mhinduro nyowani kune vanogamuchira uye inogona kugadzirisa mamwe matambudziko muzviito zvavo kubva zvino zvichienda mberi.
Nekuti mukuita, Patreon ipuratifomu kuburikidza nevanogadzira zvemukati uye maartist kutenderera pasirese vanogona kubatsirwa kubva kuvateveri vavo. Vhura Patreon Chero ani zvake anogona kupa mari diki kuburikidza nemari kana kuwanda kwevanhu, uye nekudaro muimbi anogona kuenderera nebasa rake.
Sezvo zviri pachena mune dudziro yaro, iyi ipuratifomu yepamhepo ine chekuita nemari yezvemapurojekiti, kusanganisira edhijitari, sezvo zvaisagona kuve neimwe nzira. Kunyangwe kubva pane imwe nzvimbo yekutarisa pane zvimwe zvinotsigirwa zvine maitiro akafanana, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi.
1 Patreon: inoshanda sei chaizvo?
2 Maitiro ekutora chikamu mune ino system
3 Ine chaiyo profil
4 Mimwe mipiro kubva kusevhisi iyi
Patreon: inoshanda sei chaizvo?
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kusimbisa mashandiro ayo kuti iwe ugone kutora mukana wavo pamwe nehunyanzvi kugona. Zvakanaka, mupfungwa iyi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti papuratifomu yazvino chero munhu anogona bvisa mari shoma kuburikidza nemari kana kuwanda kwevanhu, uye nekudaro mugashiri kana vashandisi vari muzere mamiriro ekuenderera nebasa ravo. Ndokunge, ichave mhando yemubhadharo iyo vateveri vavo vachazvipira nekuzvipira.
Vagadziri, kana vachinge vanyorera kuti vanyore paPatreon, ivo vanofanirwa kusarudza kana mari yavo ichave yemwedzi kana nekusika (bhuku, komiki, nezvimwewo), pamusoro pekunyora chinyorwa chinotsanangudza kune vangangove vatengi kuti account yavo yePatreon ichashanda sei uye nezvavanopa.
Nyore. Kune maviri marudzi evashandisi akanyoreswa papuratifomu: vagadziri yvateveri. Muhukama uhu hunotsigirana, vagadziri vanopa mapurojekiti avo kunharaunda yevaimbi mukutsinhana nemipiro isingazombotarisa basa racho. Ndokunge, iro basa (chero hunhu hwaro) rakatogadzirwa uye risingade muunganidzwa waro wega asi kubvumidza iro gadziriro yezvigadzirwa kuti igadzire nguva dzose. Ino haisi yechaunga yekubhadharisa chikuva!
Vagadziri vanogona kugamuchira mari kubva kuvateveri munzira mbiri, kungave nemubhadharo wemubhadharo kana semupiro-wekubvisa kune rimwe basa. Pamari iyi, iyo portal inochengeta 5% yemubhadharo wega wega.
Icho hachisi chinhu chitsva kuti muimbi anowana rubatsiro rwemari kuti agone kusimudzira basa rake. Vashoma vanga vari avo munhoroondo yese vasina kugamuchira rubatsiro kubva kumachinda uye machinda akafadzwa netarenda. Nekudaro, zvakasiyana ipapo, huzivi hwePatreon.com hausi wekubhadhara chirongwa kuti ubate asi ku batsira kumhizha kuitira kuti iwe ugone kuenderera mberi nekupa zvemukati zvako.
Maitiro ekutora chikamu mune ino system
Paunenge wakanyoreswa, pinda yako yemushandisi nhoroondo. Pakutanga, Patreon anozopa mamwe emapurojekiti anozivikanwa iwe. Neimwe nzira iwe unogona kuisa zita reprojekiti iwe yaunoda mari. Kana iwe usina chaiyo muenzi mupfungwa, tsvaga nezwi rakakosha. Dzvanya papikicha yako yepamusoro mukona yepamusoro yekurudyi kuti uwane menyu inodonhedza. Sarudza "Ongorora Vagadziri" uye uchawana peji nyowani. Mariri unogona kutsvaga mapurojekiti matsva akapararira munzvimbo dzakasiyana dzePatreon. Rondedzero yacho inosanganisira iyo yepamusoro 20 yenzvimbo yega yega.
Ine chaiyo profil
Kushandura purojekiti kuchakuendesa kune yakakodzera peji yemusiki peji. Heano maartist. Muchikamu chemashoko iwe unowana zvese zvinyorwa. Mazhinji acho haagoni kutariswa sezvo ivo vachibhadharwa zvinyorwa, inongowanikwa chete kune vanobhadhara vanonyoresa. Vagadziri vanowanzo kutumira zvemukati zvemamwe mapuratifomu, senge YouTube. Pane kudaro, ivo vanoburitsa isina kunyorwa zvinyorwa paPatreon; dzimwe nguva ivo zvakare vanopa mukana kune rako basa kare pane kune mamwe mapuratifomu. Ukabaya pane sarudzo "Iva Mutariri ” (kuva mutsigiri) iwe uchabatana nechikwata chekubhadhara mari.
Patreón inhengo yenhengo inobvumidza vagadziri kubhadharwa nevateveri vavo. Imwe yemaitiro edu makuru ndeyekuisa vavaki pakutanga, uye aya mazwi anoedza kuzviita. Tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoregeredza mazwi ekushandisa nekuti ari kufinha, asi takaita zvese zvatinogona kuti zvive nyore kunzwisisa. Pachikamu chimwe nechimwe tichapfupisa zvikamu zvakakosha kwazvo, asi pfupiso idzi hadzisunge zviri pamutemo, saka ndokumbirawo uone iyo yakazara vhezheni yacho kana iwe uine mibvunzo.
Aya ndiwo mazwi ekushandisa aPatreon, uye anoshanda kune vese vashandisi vePatreon chikuva. "Isu", "yedu" kana "isu" zvinoreva Patreon Inc. uye edu makambani. "Patreon" inoreva kuchikuva ichi nemasevhisi atinopa.
Kuti ugadzire account unofanirwa kunge uine makore angangoita gumi nematatu. Kuti ubatanidze nhengo yemusiki semubatsiri, kana kupa nhengo yemusiki, unofanirwa kunge uine makore gumi nemasere ekuberekwa kana kuva nemvumo yevabereki.
Iwe ndiwe unoita nezvese zvinoitika kana munhu apinda muaccount yako, pamwe nekuchengetedzeka kwayo. Taura nesu nekukurumidza kana iwe uchifunga kuti account yako yakanganiswa. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve chengetedzo pane yedu Security Policy peji ...
Kuti uve mugadziri, ingo vhura peji rako kuti utange kuve nhengo yako. Nhengo ndedzevateveri vako vanonyanya kufarira. Uri kuvakoka kuti vave chikamu chechimwe chinhu chinonakidza chinovapa mabhenefiti akasarudzika avanoda, senge yekuwedzera kuwana, kutengesa, kusarudzika, uye zviitiko zvekuita. Mukudzoka, vanotsigira vanobhadhara pane chinyoreso hwaro.
Semusiki, unoita kuti yako nhengo iwanikwe paPatreon, uye isu tinopa nhengo kune vako vanokutsigira pane chinyoreso hwaro. Isu tinobatawo nyaya dzekubhadhara dzakadai sehunyengeri, kubhadharisa, uye kugadzirisa gakava kugadzirisa.
Kubhadhara kunogona zvakare kuvharirwa kana kubatwa nekutyorwa kwemitemo yako kana nezvikonzero zvekuteerera, kusanganisira iko kuunganidzwa kweruzivo rwekubhadhara mutero. Kana kubhadhara kwanonoka kana kuvharwa, vanoedza kukuudza kuti sei nekukurumidza. Kuti tidzivirire vagadziri, tinogona kuvharidzira vatengi kubhadhara kana tichitenda kuti ndewemanyepo.
Dzimwe nguva zviitiko zvakaita sekudzoreredzwa zvinogona kukonzera kuti account yako balance iende isina kunaka. Kana bhalansi yako ikashanduka kuva isina kunaka ipapo tinokwanisa kudzosera mari idzodzo kuzobhadharira mune ramangwana.
Seye musiki, pane mari mbiri dzakabatana nehunhengo hwako paPatreon. Yokutanga imari yepuratifomu, iyo inosiyana zvichienderana nezinga rebasa raunosarudza. Yechipiri ndeye kubhadhara muripo wekugadzirisa, zvinoenderana nemari yakasarudzwa nemusiki.
Iyo US dhora yekubhadhara kubhadharisa fizi ndeye 2,9% kusanganisa $ 0,30 yeumwe neumwe akabudirira vimbiso yezvipikirwa zvinodarika $ 3, uye 5% kusanganisa $ 0,10 kune yega yega inobudirira vimbiso yevimbiso ye $ 3 kana pasi. PayPal kubhadhara kubva kune vasiri-US vatengi vane imwezve mari ye1%. Vagadziri vekutanga vane mari yeplatform chikuva uye mubhadharo wekubhadhara mubhadharo wenhaka. Iyo yekubhadhara mubhadharo wekugadzirisa mubhadharo unosiyana zvichienderana nezvinhu zvinoverengeka, kusanganisira huwandu hwenhengo yekunyoresa, mhando yekadhi, uye nhamba yehumwe hunhengo mushandisi abatana.
Mari yekubhadharira mari yekubhadhara iri 3,4% pamwe € 0,35 yega yega yevimbiso yevimbiso yezvipikirwa zvinopfuura matatu euros, uye 3% pamwe ne5 euros kune yega yevimbiso yevimbiso yevimbiso ye0,15 euros kana zvishoma. Iyo sterling yekubhadhara muripo wekugadzirisa iri 3% pamwe ne £ 3,4 yeumwe neumwe akabudirira vimbiso yezvipikirwa pamusoro pe £ 0,35, uye 3% pamwe £ 5 kune yega vimbiso yakabudirira yevimbiso ye £ 0,15 kana pasi.
Zvichienderana nenzvimbo yevatengi vako, mamwe mabhangi anogona kubhadharisa mutengi wako mutero wekune dzimwe nyika wekunyoresa kwavo kuve nhengo. Patreón haadzore mari iyi, asi inowanzoita 3%.
Mari zhinji dzemitero hadzibatwi, asi dzinotora ruzivo rwekuzivisa mutero vobva vazvizivisa kuzviremera zvemitero sezvinodiwa nemutemo. Iko mushandisi ane basa rekumhan'arira chero mutero, iwe unogona kuwana rumwe ruzivo mune yedu Mutero Rubatsiro Center.
Mutero wega wavanobata panzvimbo yako kubhadhara kweVAT yemasevhisi anopiwa zvemagetsi kune vatengi veEU. Nechinangwa chemasevhisi anopihwa nemagetsi, ivo vagadziri vanopa iwo masevhisi kwatiri, uyezve isu tinoapa iwo kumutengi. Kuti udzidze zvakawanda nezve mabatiro atinoita VAT, ndapota ona yedu VAT gwara.
Isu hatibvumidze zvisikwa uye mabhenefiti anotyora maitiro edu. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nekushanyira edu Nharaunda Guidelines uye Batsiro Gwara. Pfupiso yemirau iyi ndeyekuti isu hatibvumidze:
Zvisikwa zvisiri pamutemo kana purofiti
Zvisikwa kana mabhenefiti ari kushungurudza vamwe vanhu.
Zvisikwa kana mabhenefiti anoshandisa huchenjeri hwevamwe, kunze kwekunge iwe wakanyora mvumo yekuishandisa, kana kushandisa kwako kunodzivirirwa nekushandiswa kwakanaka.
Zvisikwa kana mabhenefiti nevanhu chaivo vanoita zvepabonde.
Bhenefiti inosanganisira maraffles kana mibairo inoenderana nemukana.
Kana paine vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pakati pevateveri vako, vayeuchidze kuti vanoda mvumo yekujoinha nhengo yako, uye kuti avo vari pasi pegumi nematatu havagone kushandisa Patreon. Hatidi kubvumidzwa kubvumidza chero munhu chaiye kana boka revanhu kuti vave vatsigiri vako.
Seye musiki, iwe zvakare une basa rekuchengetedza data remushandisi rakachengeteka. Iwe unogona kuona izvo zvinodiwa muData Ekugadzirisa Chibvumirano. Akaundi yakabatana neyako yekugadzira kuburitsa uye haigone kutengeswa kana kuendeswa kuti ishandiswe nemumwe mugadziri.
Mimwe mipiro kubva kusevhisi iyi
Zvinonzwika zvakanaka handiti? Zvakanaka, nekuda kwezvairehwa zvekuti mari yekugadzirisa iyi yaibhadhariswa sei kune vatengi - 2,9% + $ 0,35 pachivimbiso chega chega - zvingadai zvakanyanyisa kudhura kune vatengi kutsigira vagadziri vakasiyana siyana nezvipikirwa zve $ 1 kusvika $ 2 pamwedzi kana pachigaro. Izvi zvakakonzera kukanganisa kwevagadziri vePatreon, kunyanya vagadziri vadiki vanovimba zvakanyanya nemipiro midiki.
Shanduko haina kutora pakarepo, asi kukuvara kwakaitika. Vagadziri vakafashukira pasocial media nema skrini ekupindura kwevatengi vanga vatobvisa zvipo zvavo vachitarisira mutemo mutsva wemubhadharo. Vabatsiri nevasiki vakabatana mukushora mari itsva (yainge yakarongerwa Zvita 18), Patreon akaita chimwe chinhu chinoshamisa uye chinoshamisa kune avo vakajaira kusvika pakuziva kupera kwekufuma kwehupfumi. Kumusoro: kwakakumbira ruregerero ndokuzivisa kuti iyo new rate policy yaizotadza kuitiswa.
Takazvinzwa zvinonzwika uye zvakajeka. Hatisi kuzoita shanduko kune yedu yekubhadhara system yatakazivisa svondo rapfuura. Isu tichiri kufanirwa kugadzirisa nyaya dzakatariswa neshanduko idzodzo, asi tiri kuzodzigadzirisa neimwe nzira, uye tiri kuzoshanda newe kuti tiende kune zvakadzama, sezvataifanira kunge takaita kekutanga. Vazhinji venyu makarasikirwa nevatengi, uye marasikirwa nemari. Hapana kukumbira ruregerero kuchaita izvo, asi ndine hurombo zvakadaro. Iko kutenda kwedu kukuru kuti iwe unofanirwa kuve nehukama hwako nevateveri vako. Aya ndiwo mabhizinesi avo, uye ndivo vateveri vavo.
Chirevo chake chakaguma na "Ndinokutendai nekuenderera nekugadzira. Isu hatisi chinhu pasina imi, uye tinozviziva. Vagadziri vari kunetsekana kugara munyika ino yechikara havana kunge vaine kukunda kwakawanda nguva pfupi yadarika, saka kuzvipira kwaPatreon kusingabvumirwe kunofanirwa kuuya sekusimudzira hunhu. Asi nei shanduko iyi yakataurwa pakutanga? Ngatipfuurei iyo saga yese kusvika zvino uye tione zvidzidzo zvatinowana kubva pazviri.
Mukupindura kuwedzera kwekutanga kwehasha uye kushushikana kubva kune vakasika, Patreon akati ivo vari kuita switch yekugadzirisa nyaya iyo vagadziri vane vatsigiri vanozvipira kuve vanopa pamwedzi, vachivabvumira kutora zvemukati zvakasarudzika kubva kumusiki., Asi ivo vanodarika uye kukanzura kwavo "kunyoreswa" pamberi pekutanga kwemwedzi umo kubhadhara kwacho kunoitika. Kugadzirisa izvi, Patreón anoda kuenda kune imwe nzira umo vatengi vanobhadhara mari yekutanga ("yekutanga kubhadharisa") yekuwana izvo zvemugadziri vobva vabhadhara mwedzi wega wega nekuda kwekuenderera mberi kwavo.
Nekudaro, Patreon paakatendera vamwe vakasarudza vagadziri kuchinjira kune ino bhiri system, vatengi vakanyunyuta, sezvo zvichikuvadza avo, semuenzaniso, vanonyorera Patreon yemumwe munhu, vanobhadhara $ 5, vozobhadhariswa imwe $ 5. madhora pane yekutanga Zvita. Kugadzirisa izvi, Patreon anoda kuenda kune imwe sisitimu inoshanda zvakanyanya seyakawanda masevhisi ekunyorera: mutengi anobhadhara mwedzi wekutanga pamberi uyezvezve pagore rega rega regore rekutanga kunyoreswa zuva. Asi kuita izvi kwaizotumira mubhadharo wekugadzirisa mubhadharo unobhadharwa nevakagadzira vachikwira; kuva nevatengi vanobhadhara pagore rekunyoreswa kwavo kwemwedzi pamwedzi panzvimbo pekutanga kwemwedzi kunogadzira mashandisirwo mazhinji emunhu uye nekudaro akawanda mamwe makesi uko processor yekubhadhara inotemwa. Iko kutenda kwedu kukuru kuti vashandisi vepuratifomu vanogona kupa chimwe chinhu kupfuura zvinotarisirwa. Chero zvazvingaitika, uye pakupedzisira kuratidza chokwadi chekuti pakupera kwezuva kuri kuburikidza nemari kana kuwanda kwevanhu, uye nekudaro mugashiri kana vashandisi vari muchimiro chakazara chekuenderera nebasa ravo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Chii chinonzi Patreon uye chinoshanda sei?
Chii chinonzi Clickbait uye chinoshanda sei?